Nacnac Crush Soodhaha Saga - Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Uncategorized / Nacnac Crush Soodhaha Saga
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Julaay 20, 2021 By Isabella Franks Faallo u dhaaf
Throughout history, there have been many trends that came by and then faded in the haze of time. Si kastaba ha noqotee, there are a few that possessed such qualities that they lasted more than their expected time. Sidoo kale, Candy Crush is one of those trends which was expected to leave as quickly as it came by but the thing is Candy Crush did some different things in their game. Uniquely, Kaliya maaha inay keeneen caqabado cusub iyo heerkooda laakiin sidoo kale waxay keeneen nooc cusub oo ciyaarta ah sida Nacnac Crush Soodhaha Saga.
Nacnac Crush Soodhaha Saga waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan, marka la eego codbixinta internetka, Taxanaha sheekada Nacnac Crush. Ciyaartu waxay u muuqataa in ay raacayso isbeddel la mid ah mar kale taxaneheedii laakiin waxay sii kordhisay iyada oo ku daraysa maroojinka Soodhaha iyo nacnaca.
Ujeedooyinka ciyaartu way isbedelayaan marka aynu u gudubno qaybo iyo heerar kala duwan ee ciyaarta.
Qaybaha qaar ee caanka ah ee Candy burburin heerka Soodhaha ka mid ah:
heerka soodhaha: Tani waa nooca ugu aasaasiga ah ee heerka meesha aad kaliya ku xidhidh 3 ama noocyo badan oo Soodhaha ah si aad kor ugu qaaddo Soodhaha.
Heer baraf: waxaad ku furaysaa heerkan heer 6. Heerkan, Kaliya maaha inaad ku biirto nacnaca si wadajir ah laakiin sidoo kale waa inaad jebisaa barafyada barafka si aad u keento Soodhaha dusha sare.
heerka xumbo: Heerkan ma aha oo kaliya inaad keento orso xargaha, xagga sare, laakiin sidoo kale waa inaad kordhisaa heerarka Soodhaha ee sabuuradda.
Heerka shukulaatada: sida cad magaceeda waxaa hubaal ah in heerka shukulaatada uu ku jiro shukulaatada. Waa inaad joojisaa fidinta shokolaatada si degdega ah u koraysa.
Heerka malabka: heerkan, waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato, marka aad ka soo saartid bahallada hoostooda malabyada malabku adiga oo maanka ku haya in lakabyada malabka ee blocks ay u baahan karaan ilaa nadiifinta 6 lakabyo.
Nacnacyada gaarka ah
Qaar ka mid ah nacnacyada gaarka ah ayaa kaa caawin kara inaad nadiifiso Nacnac burburin Soodhaha saga si fudud. Kuwani waa kuwan hoos ku xusan
Nacnac la jeexay waa kan ugu horreeya. Marka lagu daro dhibcooyinka waxay sidoo kale kaa caawineysaa inaad nadiifiso saf oo dhan. Marka labaad, waxaa jira nacnac duuban. Adigoo ku habboon nacnacaan, waxaad soo saartaa nacnac badan; gaar ahaan, 8 nacnac kuwaas oo ku wareegsan nacnac duuban. Marka saddexaad, waxa jira Nacnac Kalluun oo marka aad laba iyo laba geesood isku gayso aad gaadhayso nacnaca kalluunka. Natiijo ahaan taas oo kalluunkani ay cunaan nooc gaar ah oo nacnac ah oo ku wareegsan looxa
Kuwaas oo dhan maaha. Waxaa jira nacnacyo kale sidoo kale. Waxay kaa caawinayaan nadiifinta heerka nacnaca burburiyaha soodhaha.
Dhibaatada heer kasta ee Nacnac Crush Soodhaha Saga waa ka duwan yahay. Si kastaba ha noqotee, marka aad horumarayso dhibtu waxay u badan tahay inay korodho. Guud ahaan, waxaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato inaad la kulanto caqabad ka duwan heer kasta.